Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusa-Mareeb | XAL DOON
Home NEWS Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusa-Mareeb
Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Dhuusa-Mareeb
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed /llaahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu Hoggaaminayo ayaa maalinimada beri oo Isniin ah ku sii jeeda magaalada Dhuusa-Mareeb ee Caasimada maamulka Galmudug, halkaasoo ay ka socoto qaban qaabada soo dhaweyntiisa.
Ujeedka socdaalka Madaxweynaha ayaa salka ku heysa sidii uu u soo xiri lahaa shir mudo ka badan 10 cisho ka socday Caasimadda Galmudug, kaasoo ahaa shirka dib u heshiisiinta 11-ka Beelood ee Galmudug loo qabtay.
Shirka uu madaxweynaha beri soo xirayo waxaa loogu talo galay inay ka qeyb-galaan 356 Ergo,hayeeshee ay gaareen in ka badan 700 ergo, iyadoo madaxweynaha uu dhageysan doono cabashada beelaha dega Galmudug, si tabashooyinkooda xal loogu helo.
Dhuusa-Mareeb waxaa maantaba gaaray wafdi horudhac u ah socdaalka Madaxweynaha, kuwaasoo sii diyaarinaya safarka madaxweynaha, waxaa sidoo kale magaalada ka degay Ciidamada Koofi Casta ilaalada ka heysa madaxtooyada iyo madaxda sare ee dowladda.
Si kastaba, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa 5-ti bishan Casimadda Galmudug ka furay shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug, iyadoo wali ay jiraan beelo diidan shirka, iyagoo ku andacoonaya in madaxda sare ee dalka uga bexeen balamo ay hore ula galeen.